Markab lagu haysto meel u dhow Eyl
Markab kuwa xamuulka ah oo dhowaan lagu afduubay meel u dhow degmada Eyl ayaa weli halkaa ku xayiran iyadoo af duubayaasha markabka afduubtay ay haatan ku doodayaan in markabku uu hub iyo shidaal u waday magaalada Kismaayo taasoo ay beenisay shirkadda uu markabku u raran yahay.
Markabkan oo muddo toddobaad ka hor la afduubay ayaa haatan waxa loo wareejiyay degmada Eyl iyadoo ay weli saaran yihiin dhammaan shaqaalihii markabka oo gaaraya 13 qof oo 12 ka mid ahi ay u dhasheen Suuriya qofka kalana uu yaha Iiraani.
Warar ku dhowdhow af duubayaasha ayaa sheegaya in markabku sido hub isugu jira rasaas iyo qoryo waawayn iyo shidaal laga leeyahay magaalada Kismaayo.
Guddoomiyaha gobolka Nugaal C/casiis Diiriye ayaa sheegay inaysan wax talo ah ku lahayn qabashada markabka laakiin haatan loo diray guddi heer gobol ah soo baara xaqiiqda markabka haddii waxyaabaha la sheegayo lagu waayana la siidaynayo maadaama aan loo baahnayn in dhibaato loo gaysto isu socodka ganacsiga.
Waxaa kaloo la ii sheegay in markabku u raran yahay shirkad ganacsi oo la yiraahso Towfiiq oo saldhiggeeduna yahay magaalada Boosaaso, Madaxa shirkaddan Siciid C/llaahi Deni oo aan la xiriiray ayaa isagana ii sheegay in markabku uu u raran yahay shirkaddiisa oo uu sido bur gaaraya 2000-oo tan, Siciid wuxuu intaa ku daray in markabku ka soo kicitimay dalka Yaman uuna ku socday magaalada Muqdisho.
Daartii ugu horaysay ee Sayid Maxamed uu ka dhisay Eyl, 1904-tii
Siciid wuxuu intaa ku daray in markabkan oo magiciisa la yiraahdo MV-Bariza uu ka mid yahay maraakiibta sida tooska ah uga shaqaysa gobolka tiriibkii kan ka horreeyayna uu magaalada Boosaso keenay 170tan oo sokor ah oo ay leedahay shirkadda Towfiiq isla markaana ay shirkaddu diyaar u tahay in markabka loo diro guddi soo baara xaqiiqda jirta iyo waxa markabka saaran.
Mar aan waydiyay Siciid C/llaahi inay la xiriireen maamulka wuxuu tilmaamay inay qoraal cabasho ah u gudbiyeen madaxda sare ee Boliiska oo ka ballanqaadey inay halkaa u diri doonaan ciidan ka tirsan boliiska laakiin ilaa iyo hadda aysan arrintaas wax tallaabo ah ka qaadin.
Dad madax bannaan oo ku sugan degmada Eyl oo aan la xiriiray ayaa iyana ii xaqiijiyey in markabku uusan wadin wax hub ah haba yaraatee, sababta ay af duubayaashu ay u qabsatayna ay tahay iyagoo doonaya madaxfurasho lacageed oo aan la garanayn waxa ay ku salaysan tahay.
Ganacsatada qaarkood oo aan waydiyay siday u arkaan arrinta markabkan waxay tilmaameen inay arrintaasi khal-kahl gelinayso socodka ganacsiga gobolka iyagoo taas sabab uga dhigay in ganacsigu yahay mid aan xuduud lahayn oo alaabta ka soo degta dekedda Boosaaso ay u kala gooshto gobollo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya iyo Itoobiya.
Ma aha markii ugu horraysay ee dablayda ka qaraabata xeebaha ku yaal agagaarka degmada Eyl ay qabsadaan markaakiibta xamuulka waxana jiray maraakiib kale oo ay qabsadeen ka dibna ay ka qaateen lacag madaxfurasho ah taasoo haatan u muuqata mashruuc dhaqaale raadin oo sii xoogaysanaya hase ahaatee wax ka qabashadiisa looga fadhiyo maamulka Puntaland.